Wasiirka ma leeyahay awood uu ku oggolaado Canshuur Dhaaf? – Kalfadhi
Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ansixiyay Sharciga Maaraynta Maaliyadda Guud ee dalka, kaas oo ka hadlaya nidaamka maaliyadda.
Warbixinta kooban, waxaan ku eegeynnaa nidaamka canshuur dhaafka iyo awooddaha wasiirka uu ku leeyahay oggolaanshaha canshuur dhaafka.
Wasiirka oo keliya ayaa iska leh awoodda in uu dhaafi karo canshuur ama khidmad ama rasuumaadka waajibka ah ee sharcigu ogol yahay iyo qiiimaha loo dhaafi karo, sida uu qabo Sharciga Furdooyinka ama Xeernidaamiyeyaasha uu sharcigani xeerinayo.
Wasiirka waxaa looga baahan yahay in uu kaydiyo diiwaan-gelinta canshuur dhaaf kasta iyo sababihii canshuur dhaafkaasi loo sameeyay, wuxuuna ku soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee Dowladda.
Wasiirku waa in uu oggeysiiyaa Golaha Wasiiradda iyo Hanti Dhowraha Guud canshuur dhaaf kasta iyo sababihii loo sameeyey muddo isbuuc gudihiisa ah.
Sharcigan waxaa uu sheegayaa in Wasiirku uu sanad maaliyadeed kasta maalintaas ama ka hor, 30ka, Maarso, 30ka June, 30ka Sebtermber iyo 31da Disember u gudbiyaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka canshuur dhaafiyada uu oggolaaday.
Xogta ku cad warbixinta canshuur dhaafyada ee qaybta 4aad waxaa ku jiraya:.
b) Shakhsiga canshuur dhaafka loo sameeyey.
t) Sababta canshuur dhaafka loogu sameeyay.
j) Wadarta canshuurta ka baaqatay dowladda iyo
x) Faa’iidada dowladda ka heleyso canshuur dhaafka.
Sharciga sidoo kale waxaa uu leeyahay, Xeer kasta oo xukuumadeed wuxuu isticmaalayaa awoodda canshuur dhaaf ee dhaqangalka u ah hadda, inta gaarayo mideynta sharciga maaraynta maaliyadda ee khuseeya arrinta.
Muxuu salka ku hayaa khilaafka Labada Aqal ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya?